ရန်ကုန်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အပြုံးချိုချိုနဲ့ ဂျပန်ကြီးရဲ့ Don Don Oden ဂျပန်ဆိုင်လေး
15 Oct 2018 . 5:48 PM
ခုတစ်လော Facebook ပေါ်မှာ အရမ်းမတရား ခေတ်စားနေတဲ့ ဂျပန် Oden တုတ်ထိုးဆိုင်လေး ရှိသဗျ။ နာမည်ကြီးလွန်းလို့ လူတိုင်း သွားစားနေကြတာ ရောင်းရလွန်းလို့ ညဆို စောစောတောင်ဆိုင်ပိတ်ရသတဲ့။ ဘာလို့များပါလိမ့်?
ခေတ်စားတယ်ဆိုတာ ဒီလို။ အဲ့ဒီ ဂျပန်တုတ်ထိုးဆိုင်လေးကို ဖွင့်တာက ဂျပန်ကြီးတစ်ယောက်တည်း။ သူ့ကြောင့်ပဲ ဒီဆိုင်လေးက နာမည်ကြီးလာရတယ်ပြောရမယ်။
အဲ့ဒီဂျပန်ကြီးက သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာဗျား။ ဆိုင်ထဲဝင်တာနဲ့ပြုံးရွှင်နေအောင် ကြိုဆိုတယ်။ သူ့ဗမာစကားမတတ်တခေါက်လေးနဲ့ ကောင်းနိုးရာရာအကြိုက်လေးရွေးပေးတယ်။ ပြီးရင်သူကိုယ်တိုင်ချက်ပြီး မြန်မြန်ကောင်းကောင်းလေးပြင်ပေးတယ်။ ဒါပဲလားဆို မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ ပြန်ရင်ပြန်တဲ့အထိ သူအားချိန်လေးဆို ဆိုင်ပေါက်ထိ လိုက်နှုတ်ဆက်တယ်။ ဒီလောက်ဖော်ရွေစေတနာကောင်းမှတော့ ပြန်မလာဘဲနေချင်မလား..နော့။
ပြောရရင်ဆိုင်လေးက တကယ့်ကိုမှ သေးသေးလေး။ အဝါနဲ့ အပြာဖျော့ဖျော့အရောင်လေးတွေ ကစားထားတယ်။ သူ့ဆိုင်လေးဆိုတာလည်း တစ်ဆိုင်လုံးက သေးသေးလေးပေမယ့် တကယ့်ဂျပန်မြို့လယ်က နေရာလေးရောက်သွားသလိုကို ချစ်ဖို့ကောင်းတာ။ ဂျပန်ရိုးရာ သီချင်းလေးတွေ ဖွင့်လို့၊ အရုပ်လေးတွေ၊ ပန်းကန်လေးတွေကအစ လိုချင်စရာကိုကောင်းလို့။ အရာရာ စိတ်ချမ်းသာစရာလေး။
ကဲ…အစားအစာအကြောင်းပြောရရင်တော့ အဓိကက Oden လို့ ခေါ်တဲ့ ဂျပန်တုတ်ထိုးလေးတွေကို ရောင်းတယ်။ Laksa လို့ခေါ်တဲ့ မလေးရှားအုန်းနို့ခေါက်ဆွဲတို့ ဝက်စင်းကောချဉ်စပ်ခေါက်ဆွဲတို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစားစရာလေးတွေရောင်းတယ်။ BBQ အကင်လေးတွေလည်း ရတယ်။
ဈေးတွေအရင်ပြောချင်လွန်းလို့ စပြောပါရစေဗျို့။ တုတ်ထိုးဆို တုတ်ထိပ်က အရောင်အလိုက် တစ်ချောင်း ၂၀၀၊ ၃၀၀၊ ၅၀၀ ။ ကျန်တဲ့ပွဲလေးတွေက ၁၅၀၀ ဝန်းကျင်လေးတွေပဲရှိတယ်။
ပွဲသေးဆို ပန်းကန်လုံးသေးသေးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းအောင်ထည့်ပေးတယ်။ သေးပေမယ့်အထင်မသေးနဲ့နော်။ ဇောက်နက်တယ် များများဆန့်တယ် အဟွင်း ဟွင်း…
အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကြိုက်တဲ့သူများရှိရင်လေ ဒီဆိုင်လေးက Laksa ကို မဖြစ်မနေ စားကြည့်သိလား။ ကိုယ်တွေဗမာစာကလေးခွေကြော်လေးတွေရော Ramen ခေါက်ဆွဲသားလုံးလေးနဲ့ အုန်းနို့ရည် လေးလေးဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ ဘဲဥလေးတစ်ခြမ်းနဲ့ စားလို့ကောင်းလိုက်တာ..ပွဲသေး ၁၅၀၀ တန်တောင် ဗိုက်ဝသဗျ။
Japanese Dan Dan Noodle ဆိုတာက ဝက်စင်းကောနဲ့ Ramen ပုံစံကိုမှ ခပ်စပ်စပ်လေး။ စားရတာ ခေါက်ဆွဲလုံးလေး ရှလွတ်ရှလွတ်နဲ့ စားရတာ အရသာထိမိတယ်။ အမှန်ပြောရရင် ဂျပန်ခေါက်ဆွဲတွေဆိုတော့ ကိုယ်တွေဗမာတွေနဲ့ ကြိုက်ပါ့မလားပေါ့။ ဘာလိုမှန်းမသိ လိုနေရင် ဆက်ကိုမစားချင်တော့တာမျိုးလေ။
ဒီဂျပန်ကြီးကတော့ လက်ရာက လုံးဝ ရှယ်ကောင်းတာလို့ပြောရမယ်။ တော်တော်လေးကို ကြွေမိတဲ့ ဂျပန်စာလေးတွေပါပဲဗျာတို့ရေ။
လူတိုင်း အမွှန်းတင်နေကြတဲ့ Oden တုတ်ထိုးလေးတွေကတော့ အခရာ့အတွက် ပုံမှန်ပါပဲ။ ငါးအိုးစည်တို့၊ ဝက်မှိုလုံးတို့၊ ငါးဖယ်လုံးတို့ အဲ့လို တုတ်ထိုးလေးတွေကို မုန်လာဥဟင်းချို အချိုလေးရယ်၊ ချဉ်စပ်လေးရယ် ဟင်းချို၂မျိုးရွေးပြီး သောက်လို့ရတယ်။ အချဉ်ကတော့ ၃ မျိုးပေးထားတယ်။ ပြောင်းဖူး၊ ရွှေဖရုံတုတ်ထိုးလေးတွေပါရှိတယ်။
အဲ့ဒီ အပေါ်က ပွဲတွေစား၊ ကြက်ကင်လေးတစ်ချောင်းစား၊ တုတ်ထိုး၆ချောင်းလောက်အဝကြိတ်၊ ဆိုဒါအအေးတစ်ခွက်သောက်တာတောင် လုံးဝ လုံးဝ တစ်သောင်းမကျော်ခဲ့ပါဘူးဆို။ အဲ့လောက်ဆိုတာ ၃ယောက်စားစာလောက်ရှိတယ်လေ။ ကဲ…မတန်ဘူးလားပြော။ ဘက်ဂျက်အရလည်း တော်တော် Safe ဖြစ်တယ်။
တခြား ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေက Wifi တော်တော်ကြီး စွတ်ကောင်းတယ်။ ဆိုင်လေးက Instagramworthy Place လေး။ ဆိုင်ထောင့်က Don Don Oden ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးနဲ့ ရိုက်ရင်ကို အထာကျနေပြီ။
ကျန်တာတွေအသာထားပြီး ဂျပန်ကြီး ဖော်ရွေလွန်းတာနဲ့တင် စိတ်တွေမတရားချမ်းသာခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးပါပဲ။
အရသာကလည်းကောင်း၊ wifi လေးလည်းကောင်း၊ ဈေးလေးကလည်း ကျောင်းသားလူငယ်တွေကအစထိုင်လို့ တန်တယ် ကောင်းတယ်ဆိုတော့ …
စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းဆိုတာ အရသာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို ရောင်းရတာပါ။ အဲ့ဒီ ၂ခုလုံး ဟန်ချက်ညီမှ အဲ့စားသောက်ဆိုင်ရေရှည်တိုးတက်နိုင်တာပါ။ ဒီခေတ်မှာ စိတ်ရင်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဆိုင်တွေ ရှားပြီးရင်း ရှားလာတဲ့အချိန် ဂျပန်ကြီးရဲ့ Don Don ဆိုင်လေးကတော့ လာတဲ့သူတိုင်း စိတ်ချမ်းချမ်းသာစားပြီးပြန်ရတဲ့ ဆိုင်လေးပါပဲ။
ကဲ…အခရာ့အကြိုက် ဂျပန်ကြီးရဲ့ Don Don Oden ဆိုင်လေးကို မြေနီကုန်း City Mart နား shopping ထွက်ရင်၊ Strategy First မှာ သင်တန်းဆင်းရင်၊ ဒါမှမဟုတ်အဲ့နားရောက်ခဲ့ရင် သွားအားပေးပြီး သူ့ဖော်ရွေမှုတွေပိုက်ပြန်ခဲ့ပါဦးလို့။
လိပ်စာကတော့ အမှတ် ၄၊A ပဒေသာလမ်း၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်နော်။ ဪ…ဆိုင်က ခုဆို ညစောစောကုန်တတ်လို့ မနက် ၁၁ နာရီကနေ ည ၈လောက်ထိပဲသွားကြနော်။
ရနျကုနျမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ အပွုံးခြိုခြိုနဲ့ ဂပြနျကွီးရဲ့ Don Don Oden ဂပြနျဆိုငျလေး
ခုတဈလော Facebook ပျေါမှာ အရမျးမတရား ခတျေစားနတေဲ့ ဂပြနျ Oden တုတျထိုးဆိုငျလေး ရှိသဗြ။ နာမညျကွီးလှနျးလို့ လူတိုငျး သှားစားနကွေတာ ရောငျးရလှနျးလို့ ညဆို စောစောတောငျဆိုငျပိတျရသတဲ့။ ဘာလို့မြားပါလိမျ့?
ခတျေစားတယျဆိုတာ ဒီလို။ အဲ့ဒီ ဂပြနျတုတျထိုးဆိုငျလေးကို ဖှငျ့တာက ဂပြနျကွီးတဈယောကျတညျး။ သူ့ကွောငျ့ပဲ ဒီဆိုငျလေးက နာမညျကွီးလာရတယျပွောရမယျ။
အဲ့ဒီဂပြနျကွီးက သိပျခဈြဖို့ကောငျးတာဗြား။ ဆိုငျထဲဝငျတာနဲ့ပွုံးရှငျနအေောငျ ကွိုဆိုတယျ။ သူ့ဗမာစကားမတတျတခေါကျလေးနဲ့ ကောငျးနိုးရာရာအကွိုကျလေးရှေးပေးတယျ။ ပွီးရငျသူကိုယျတိုငျခကျြပွီး မွနျမွနျကောငျးကောငျးလေးပွငျပေးတယျ။ ဒါပဲလားဆို မဟုတျသေးဘူးဗြ။ ပွနျရငျပွနျတဲ့အထိ သူအားခြိနျလေးဆို ဆိုငျပေါကျထိ လိုကျနှုတျဆကျတယျ။ ဒီလောကျဖျောရှစေတေနာကောငျးမှတော့ ပွနျမလာဘဲနခေငျြမလား..နော့။
ပွောရရငျဆိုငျလေးက တကယျ့ကိုမှ သေးသေးလေး။ အဝါနဲ့ အပွာဖြော့ဖြော့အရောငျလေးတှေ ကစားထားတယျ။ သူ့ဆိုငျလေးဆိုတာလညျး တဈဆိုငျလုံးက သေးသေးလေးပမေယျ့ တကယျ့ဂပြနျမွို့လယျက နရောလေးရောကျသှားသလိုကို ခဈြဖို့ကောငျးတာ။ ဂပြနျရိုးရာ သီခငျြးလေးတှေ ဖှငျ့လို့၊ အရုပျလေးတှေ၊ ပနျးကနျလေးတှကေအစ လိုခငျြစရာကိုကောငျးလို့။ အရာရာ စိတျခမျြးသာစရာလေး။
ကဲ…အစားအစာအကွောငျးပွောရရငျတော့ အဓိကက Oden လို့ ချေါတဲ့ ဂပြနျတုတျထိုးလေးတှကေို ရောငျးတယျ။ Laksa လို့ချေါတဲ့ မလေးရှားအုနျးနို့ခေါကျဆှဲတို့ ဝကျစငျးကောခဉျြစပျခေါကျဆှဲတို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစားစရာလေးတှရေောငျးတယျ။ BBQ အကငျလေးတှလေညျး ရတယျ။
ဈေးတှအေရငျပွောခငျြလှနျးလို့ စပွောပါရစဗြေို့။ တုတျထိုးဆို တုတျထိပျက အရောငျအလိုကျ တဈခြောငျး ၂၀၀၊ ၃၀၀၊ ၅၀၀ ။ ကနျြတဲ့ပှဲလေးတှကေ ၁၅၀၀ ဝနျးကငျြလေးတှပေဲရှိတယျ။
ပှဲသေးဆို ပနျးကနျလုံးသေးသေးလေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးအောငျထညျ့ပေးတယျ။ သေးပမေယျ့အထငျမသေးနဲ့နျော။ ဇောကျနကျတယျ မြားမြားဆနျ့တယျ အဟှငျး ဟှငျး…
အုနျးနို့ခေါကျဆှဲကွိုကျတဲ့သူမြားရှိရငျလေ ဒီဆိုငျလေးက Laksa ကို မဖွဈမနေ စားကွညျ့သိလား။ ကိုယျတှဗေမာစာကလေးခှကွေျောလေးတှရေော Ramen ခေါကျဆှဲသားလုံးလေးနဲ့ အုနျးနို့ရညျ လေးလေးဆိမျ့ဆိမျ့လေးနဲ့ ဘဲဥလေးတဈခွမျးနဲ့ စားလို့ကောငျးလိုကျတာ..ပှဲသေး ၁၅၀၀ တနျတောငျ ဗိုကျဝသဗြ။
Japanese Dan Dan Noodle ဆိုတာက ဝကျစငျးကောနဲ့ Ramen ပုံစံကိုမှ ခပျစပျစပျလေး။ စားရတာ ခေါကျဆှဲလုံးလေး ရှလှတျရှလှတျနဲ့ စားရတာ အရသာထိမိတယျ။ အမှနျပွောရရငျ ဂပြနျခေါကျဆှဲတှဆေိုတော့ ကိုယျတှဗေမာတှနေဲ့ ကွိုကျပါ့မလားပေါ့။ ဘာလိုမှနျးမသိ လိုနရေငျ ဆကျကိုမစားခငျြတော့တာမြိုးလေ။
ဒီဂပြနျကွီးကတော့ လကျရာက လုံးဝ ရှယျကောငျးတာလို့ပွောရမယျ။ တျောတျောလေးကို ကွှမေိတဲ့ ဂပြနျစာလေးတှပေါပဲဗြာတို့ရေ။
လူတိုငျး အမှနျးတငျနကွေတဲ့ Oden တုတျထိုးလေးတှကေတော့ အခရာ့အတှကျ ပုံမှနျပါပဲ။ ငါးအိုးစညျတို့၊ ဝကျမှိုလုံးတို့၊ ငါးဖယျလုံးတို့ အဲ့လို တုတျထိုးလေးတှကေို မုနျလာဥဟငျးခြို အခြိုလေးရယျ၊ ခဉျြစပျလေးရယျ ဟငျးခြို၂မြိုးရှေးပွီး သောကျလို့ရတယျ။ အခဉျြကတော့ ၃ မြိုးပေးထားတယျ။ ပွောငျးဖူး၊ ရှဖေရုံတုတျထိုးလေးတှပေါရှိတယျ။
အဲ့ဒီ အပျေါက ပှဲတှစေား၊ ကွကျကငျလေးတဈခြောငျးစား၊ တုတျထိုး၆ခြောငျးလောကျအဝကွိတျ၊ ဆိုဒါအအေးတဈခှကျသောကျတာတောငျ လုံးဝ လုံးဝ တဈသောငျးမကြျောခဲ့ပါဘူးဆို။ အဲ့လောကျဆိုတာ ၃ယောကျစားစာလောကျရှိတယျလေ။ ကဲ…မတနျဘူးလားပွော။ ဘကျဂကျြအရလညျး တျောတျော Safe ဖွဈတယျ။
တခွား ကောငျးတဲ့အခကျြလေးတှကေ Wifi တျောတျောကွီး စှတျကောငျးတယျ။ ဆိုငျလေးက Instagramworthy Place လေး။ ဆိုငျထောငျ့က Don Don Oden ဆိုတဲ့ ဆိုငျးဘုတျလေးနဲ့ ရိုကျရငျကို အထာကနြပွေီ။
ကနျြတာတှအေသာထားပွီး ဂပြနျကွီး ဖျောရှလှေနျးတာနဲ့တငျ စိတျတှမေတရားခမျြးသာခဲ့တဲ့ဆိုငျလေးပါပဲ။
အရသာကလညျးကောငျး၊ wifi လေးလညျးကောငျး၊ ဈေးလေးကလညျး ကြောငျးသားလူငယျတှကေအစထိုငျလို့ တနျတယျ ကောငျးတယျဆိုတော့ …
စားသောကျဆိုငျလုပျငနျးဆိုတာ အရသာနဲ့ဝနျဆောငျမှုကို ရောငျးရတာပါ။ အဲ့ဒီ ၂ခုလုံး ဟနျခကျြညီမှ အဲ့စားသောကျဆိုငျရရှေညျတိုးတကျနိုငျတာပါ။ ဒီခတျေမှာ စိတျရငျးနဲ့ ဝနျဆောငျမှုပေးတဲ့ဆိုငျတှေ ရှားပွီးရငျး ရှားလာတဲ့အခြိနျ ဂပြနျကွီးရဲ့ Don Don ဆိုငျလေးကတော့ လာတဲ့သူတိုငျး စိတျခမျြးခမျြးသာစားပွီးပွနျရတဲ့ ဆိုငျလေးပါပဲ။
ကဲ…အခရာ့အကွိုကျ ဂပြနျကွီးရဲ့ Don Don Oden ဆိုငျလေးကို မွနေီကုနျး City Mart နား shopping ထှကျရငျ၊ Strategy First မှာ သငျတနျးဆငျးရငျ၊ ဒါမှမဟုတျအဲ့နားရောကျခဲ့ရငျ သှားအားပေးပွီး သူ့ဖျောရှမှေုတှပေိုကျပွနျခဲ့ပါဦးလို့။
လိပျစာကတော့ အမှတျ ၄၊A ပဒသောလမျး၊ မွနေီကုနျး၊ စမျးခြောငျးမွို့နယျနျော။ ဪ…ဆိုငျက ခုဆို ညစောစောကုနျတတျလို့ မနကျ ၁၁ နာရီကနေ ည ၈လောကျထိပဲသှားကွနျော။